SomaliTalk.com » 2011 » December
Home » Archive Bisha December, 2011
Shirkii Garoowe oo soo gabagaboobey Sabtidii Dec 24, 2011 ayaa go’aamadii ka soo baxay waxaa kamid ahaa in xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Soomaaliya loo samaynayo June 2012, laguna soo doorto habka-qabiilka ee loo yaqaan 4.5, isla markaasna lagu soo koobo 225 xildhibaan. Madaxweynaah DGPL waxa uu sheegay in sababta go’aankaas 4.5 ay u aqbaleen ay tahay in ay ugu turayaan madaxda ka...
Halkudheg: garoowe, Roadmap
Waxaa lasoo gaaray waqtigii ay ku talagashay Kenya in Shiidaalkii Badda Soomaaliya loo qodo
Waxaan Ummadda Soomaaliyeed la socodsiinayaa in lasoo gaaray waqtigii aay ku tala gashay Dowladda Keenya in shiidaalka batroolkii badda Soomaaliya loo qodo, ayadoo isla markaasna ay ciidammada Dalka Kenya ku suganyihiin gudaha Dalka Soomaaliya. Intaas waxaa dheer in dayaaradohoodu ay duqeynayaan magaalooyin Soomaaliyeed. Waxaa arrin la yaab leh ah annagoo la wada soconna DAMACA aay KENYA ka leedahay Batroolka...
Halkudheg: Badda, Kenya
Fadhigii Baarlamanka KMG oo Mar Kale Gacmaha la Isula Tegay, Isla markaana markii Dambe Af Garad Ku Soo Gaba Gaboobey
Iyadoo maantay sidii qorshuhu ahaa xildhibaanada Baarlamanka KMG ee ka soo horjeeda Guddoomiyihii hore Baarlamanka Federaalka Soomaaliya Shariif Xasan Shiikh Aadan ay u Madalsanayeen Xarunta Golaha Shacabka ayaa sheekadaba waxa ay ku bilaaban tay Ciidamada ammaanka ee Goobtaas ku sugan iyo Xildhibaanada oo Foodda Is Daray kadib markii Ciidamada Diideen in wax kulana ah uu ka dhaco Xarunta Golaha Ciidamada...
iyo Xaaladda Magaalada caabud Waaq oo Deggan Ka Gadaal Dagaalo Halkaa Ka Dhacay…. Warbixin: Maamulka Ximan iyo Xeeb oo oo Goodiyay… Afhayeenka Maamulka Ximan iyo Xeeb Maxamed Cumar Hagafeey ayaa ka war bixiyay Daan daansi uu sheegey beryahanba in maamulkoodu ay ku hayeen ahlu sunada Gobolada Dhexe. Afhayeenka ayaa sheegey inays an jirin wax u dhaxeeya iyaga iyo ahlu sunna, dhul...
Halkudheg: caabudwaaq, ximan